Kuunza mota kubva kuNew Zealand kuenda kuUK | Yangu Mota Kunze
Uri kutarisa kuendesa mota yako kubva kuNew Zealand kuenda kuUnited Kingdom?
Isu tine ruzivo rwakakura mukutenga mota kubva kuNew Zealand kuenda kuUK. Tinogona kubata muitiro wese kusanganisira kuburitsa kunze, kutumira, kubvumidzwa kwetsika, UK inland trucking, kuteedzera kuyedza uye kunyoresa kweDVLA - izvi zvinokuchengetera nguva, kunetsekana uye mari isingafanoonekwi.
Ruzivo rwedu rwekupinza mota kubva kuNew Zealand kuenda kuUK kunotibvumidza kunyatso taura nezvese chiitiko chekupinza. Tora mutengo nhasi wemutengo wakaringana wekuunza mota kuUK uye nemigwagwa yakazara unyore.
Vamiriri vedu veNew Zealand vakasarudzwa zvine hungwaru kuti vatarisane nemotokari dzatinounza kune vatengi vedu. Tinogona zvakare kutaura kuti tinotora mota yako kubva kumberi kure kuNew Zealand pakukumbira kwako. Isu tinowanzo takura mota tichishandisa zvakagovaniswa midziyo, zvisinei zvinogona zvakare kunongedzera kune 20ft yakatsaurirwa mudziyo zvakare, zvichireva kuti iwe unobatsirwa kubva pamutengo wakadzikiswa wekufambisa mota yako kuenda kuUK nekuda kwekugovana mutengo wemudziyo nedzimwe mota dzatiri kuendesa panzvimbo yevatengi. Midziyo yekutakura inzira yakachengeteka uye yakachengeteka yekupinza mota yako kuUK uye kazhinji ndiyo inodhura kwazvo.
Pakununura mota kubva kuNew Zealand, kune nzira ina dzakasiyana dzekubvisa tsika muUK, zvinoenderana nekwakatangira mota, zera uye mamiriro ako.
Uri kudzokera kumashure semunhu anotamisa achienda kuUnited Kingdom? Kana iwe uine mota kwemwedzi inopfuura mitanhatu uye uine humbowo hwekugara muNew Zealand ichitambanudza kumashure gumi nemaviri mwedzi - ipapo kupinza kwako muzviitiko zvakawanda hakuzovi pasi pekupinza mutero nemitero.
Kune mota dziri pasi pemakore gumi, paunosvika kuUK, mota yako inofanirwa kutevedzera UK mhando yekubvumidzwa. Isu tinoita izvi neIVA kuyedza mota. Isu tine yega nzira yekuvheneka yeIVA yekuyedza iri munyika, zvinoreva kuti nguva yekumirira bvunzo yeIVA yakadzikiswa zvakanyanya zvichienzaniswa nenzvimbo dzekuyedza dzehurumende mukwikwidzi wedu wevanotenga mota UK vachange vachishandisa.
Yese mota yakasarudzika uye mugadziri wega ane dhizaini saka tinotungamira vatengi vedu kuburikidza neicho chiitiko, saka ndokumbira utore mutengo uye isu tinogona kukurukura nezve optimum kumhanya uye mutengo sarudzo yako wega mamiriro.
Motokari dzinobva kuNew Zealand dzinogona kuda kumwe kugadziridzwa zvichienderana nemodeli, idzi dzinogona kunge dzichichinja iyo yekumhanyisa kuita MPH uye nekumira kwechiedza chemberi chemwenje kana chisati chavepo.
Kubva pamakore ekuunza mota kubva kuNew Zealand kuenda kuUK, isu tinoziva zvinodiwa zvichienderana nemota yaunoda kuunza kunze, saka tora chitauro kubva kwatiri nhasi kune yako yakatemerwa quote.
Vanopfuura gumi-makore-makore mota vane mhando mvumo isingabhadharwe, asi zvichiri kuda MOT bvunzo uye zvigadziriso zvakafanana nezvinodiwa pakuedzwa kweIVA usati wanyoresa. Iko kunatsurudzwa kunoenderana nezera asi kazhinji kune yekumashure mhute mwenje nzvimbo.
Zvinodhura zvakadii kupinza mota kubva kuNew Zealand?
PaMotokari Yangu Inotakura tinopa sevhisi yakakwana yekutora, zvisinei, zvirevo zvese zvinofungidzirwa kune yako chaiyo mota nezvinodiwa. Usanonoka kupinda mukutaurirana kweasina chisungo chakatemwa kupinza mota yako kubva kuAustralia kuenda kuUnited Kingdom.